အသစ်! ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များနှင့် ပညာပေးသင်ကြားရေး အစီအစဉ်များကို FBS ၀က်ဆိုဒ်မှာ ၀န်ဆောင်ပေးနေပါပြီ.
Forexဈေးကွက် သုံးသပ်ချက်တွေကို လေ့လာသင်ယူပြီး သင့်ရဲ့အရောင်းအ၀ယ်စွမ်းရည်တွေကို မြှင့်တင်လိုက်ပါ.
FBSသည် မိမိက်ေသည်တော်များ၏ မှတ်ချက်အကြံပြုချက်များကို အလေးထား၍ ၀န်ဆောင်မှုပိုင်းကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်. ဖောက်သည်တော်များအနေနဲ့ အရေးကြီးသော သတင်းအချက်အလက်များ၊ ငွေကြေး၊ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး စသည့်သတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရရှိစေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အတွက် အခမဲ့ ဈေးကွက် သုံးသပ်ချက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးရဈေးကွက်အခြေအနေတွေ သတင်းတွေကို သိရဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ သတင်းအစီအစဉ်ကို စောင့်ကြည့်နေပါ.
အရေးကြီးသည့် အချက်အလက်ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် သတင်းများကိုလေ့လာသုံးသပ်နိုင်စေဖို့အတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာဒေတာများကို သင့်အနေနဲ့အချိန်မီသိရှိရအောင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့မှ ကူညီလမ်းပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်.
ဒီမှာကတော့ သုံးသပ်ချက်ကဏ္ဍမှာ ဆွေးနွေးတင်ပြပေးည့် ခေါင်းစဉ်အချို့ဖြစ်ပါတယ်:
• Forex သုံးသပ်ချက်များ – ငွေလဲနှုန်းဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းချက်များ၊ အရောင်းအ၀ယ်အချက်ပြမှုများ၊ အရောင်းအ၀ယ် အကြံပေးချက်များ.
• ဈေးကွက် သတင်းများ – ဈေးကွက် အမြင်များ၊ အရေးကြီးသည့် စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သတင်းများ.
• Forex တီဗွီ – မြန်ဆန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဈေးကွက်အမြင်များနှင့် အရောင်းအ၀ယ်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များ
• စီးပွားရေး အချက်အလက် ထုတ်ပြန်ချက် – အရေးကြီး စီးပွားရေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်များ တစ်ရက်တာ စာရင်း.